Alatsinainy 07 Oktobra 2019. – FJKM
Alatsinainy 07 Oktobra 2019.
Mirehitra amin’ny fahatezerany koa i Jeremia fa efa mihoam-pampana loatra ity ataon’Israely : « Fa ny fahatezeran’i Jehovah mahafeno ahy ka tsy zakako tsindrina intsony » (and11)? Hoy Izy :
1-Manao bemarenina amin’ny Tenin’ny Tompo ny olona .
Hoy ny Mpaminany : »Iza no hilazako sy hanariko mba handrenesany ? Indro , ny sofiny dia tsy voafora ka tsy mahahaino izy . He ! tsatsoiny ny Tenin’i Jehovah ka tsy ankamaminy » (and10) . Izany ange izao no ataon’ny olona maro manodidina antsika e!
2-Resin’ny fitiavam-bola ny olona :
« izy rehetra na ny kely na ny lehibe dia samy fatra-pila harena avokoa » (and13) . Fa angaha tsy fanompoana vola koa no hihazakazahan’ny olona marobe izao?
3-Ny mpanompon’ Andriamanitra natao hampibebaka , manafosafo fotsiny ny fahotan’ny olona: » Fa nataotaony foana ny fanasitranany ny faharatran’ny oloko zanakavavy tamin’ny nanaovany hoe: fiadanana , fiadanana, Kanjo tsy misy fiadanana tsinona » (and14).
4-Ny vahoaka , maditra avokoa !
Toroana fa tsy mety : « anontanio …izay làlana mankany amin’ny tsara , ka iny no izory, dia hahita fitsaharana ho an’ny fanahinareo ianareo . Nefa hoy izy :tsy hizotra izahay » (and16) . « Tena maditra avokoa izy rehetra «
Mahonena nefa mifankaiza amin’izany moa isika ankehitriny ?